Kugadzira marashi ndicho chikamu chinokosha chekubudirira mune bhizinesi. Pasinei nehukuru hwebhizimisi rako, iwe unofanirwa kugara uchiziva nezvezvinhu zvitsva zvitsva mukutengesa kwewebhu. Pasina kutengesa mhinduro, kambani ine mukana wepamusoro wekukundikana. Ichi chinyorwa ndechiedza yekutsanangura pfungwa yekutengeserana kwepaIndaneti mumashoko ari nyore. Saka, pedyo nechokuita.
kutsanangura kwekutsvaga kwekutsvaga
kutengeswa kwepaIndaneti isarudzo dzemasimba ane simba anobatsira kugadzira mukurumbira wechigadzirwa uye kubudiswa paIndaneti kuburikidza nekushandisa zvishandiso zvakasiyana siyana zvewebhu. Kutengeswa kwepaIndaneti kunonziwo kutengeswa kweInternet kana kutengeswa kwepaIndaneti. Kutengeswa kweWebhu kune zvose nezvekusimudzira michina nemasevisi kuburikidza ne internet, kuwana zita rekambani kuvanhu. Nzira iyo kubudiswa kwekutenga kunosimudzira bhizinesi kuwedzerwa kukwanisa kwayo kuwanika paIndaneti.
Zvikamu zvekutengeserana kwepaIndaneti
Kubudiswa kwepaIndaneti kunosanganisira huwandu hwakawanda hwezvinhu kunze kwekutengeswa kwemazuva ose nekuda kwezvimwe nzira uye nzira dzinowanikwa pamatare. Pamunosvika mukusimudzira bhizinesi rako paIndaneti, pane zvishanu zvinyorwa zvekutanga zvinofanira kuongororwa. Pano ivo ndevamwe:
Injini yekutsvaga kutengesa;
Zvose zviri pamusoro apa zvinosanganisira zvinangwa zvekutengeserana zvepaIndaneti kana zvinangwa zvekutengesera zvinogona kukubatsira kusvika kune chinangwa chako. Ngatitangei pane imwe neimwe yemaitiro aya.
Zvinhu zvakasikwa zvakasikwa
Zvinokosha uye zvinogadziriswa ndicho chinhu chinonyanya kukosha paunenge uchikurudzira. Nguva dzose chinangwa chekugadzirisa zvitsva uye zvinokosha zvakakosha nokuda kwezvaunotarisira, zvingava zvinyorwa, maikirwo, mavhidhiyo, kana chero ipi zvayo yeruzhinji rwemashoko. Zvinyorwa uye zvinonakidza zvinoita kuti vashanyi vepawebsite vaverenge zvakawanda, vagovana, vabvunze, uye varatidze bhizinesi renyu kune vamwe. Saka, musati mabudisa zvinyorwa zvepaIndaneti, iva nechokwadi chokuti zvinonakidza uye zvinokosha kune vaverengi vako. Chimwe chinhu chaunofanira kuyeuka ndechokuti unhu hwakakosha kupfuura huwandu. Funga nezvekusika zvinhu zvinotengesa kana kuwedzera kukosha.
Mazano ekutsvakurudza injini yekutsvaga
Mishonga yekutsvaga injini inoshandiswa kukurudzira ruzivo. Iyi nzira yekudhinda inosanganisira mbiri huru dzekutsvaga: search injini optimization (kana SEO) uye yakabhadhara kutsvaga (kana PSA). Yokutanga inobatsira kutengesa vashanyi vatsva kune rako rega rega kusununguka apo yechipiri inogadzira motokari kune webhusaiti kune imwe mari yekubhadhara, kazhinji pabhadharo-pa-pachokwadi.
Bhizinesi rine kero yemuviri rinofanira kunyatsofungisisa SEO yepamunharaunda. Iva nechokwadi chekuti nzvimbo yacho inowirirana mukati memunharaunda yako. Localized SEO inokosha pakusvika kune vateereri munharaunda. Apo vanhu vachitsvaga paIndaneti, vanowanzobatanidza nzvimbo uye tsvakurudzo dzinoita mapeji emigumisiro uye kudzokera kwaro kutanga.
Kushandisa nhepfenyuro ndeimwe nzira yekuzadzisa zvinangwa zvekutengeserana kwako paIndaneti. Edza kukwezva sevateveri vakawanda sezvinobvira. Vimbisei kuti vaedze mabasa enyu kana michina. Iwe unogona kuita izvi nekuonekwa nekushanda pa Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, uye mutsara unoenderera mberi. Isa zvinyorwa zuva nezuva kana kunyanya kakawanda. Mhinduro kumashoko, mazwi, uye mubvunze vateveri vako kuti vatume.
Imwe pfungwa huru ndeyokupinda mukutengesa kushambadzira. Tarisa pakusvika kune vateereri vako kuburikidza nemashandisi avo anoshandisa zvakanyanya, zvakadai sefoni uye mahwendefa. Sezvo iwe unogona kunzwisisa, izvi zvinosanganisira kuuya ne "mobile-friendly" version ye website yako. Uyewo, funga kugadzira purogiramu yefoni inogona kuita kuti zvive nyore kuti vatengi vako vawane zvigadzirwa.
Mazuva ano, kutengeserana kwemaIndaneti kuri kuwedzera kukurumbira pakati pemabhizimisi maduku evanhu vose, izvo hazvishamisi. Shandisa mazano ari pamusoro apa ekusimudzira bhizinesi rako - ivo vachakubatsira kusvika kune zvinangwa zvekutengeserana kwako paIndaneti Source .